च्यारिटीमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउँदा ‘दि कर्मा’ टिम दंग « रंग खबर
च्यारिटीमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउँदा ‘दि कर्मा’ टिम दंग
नेपाल चलचित्र कलाकार संघको सहयोगार्थ फिल्म दि कर्मा को च्यारिटी सम्पन्न गरिएको छ । मंगलबार च्यारिटीबाट उठेको रकम संघलाई प्रदान गरिएको फिल्मका निर्माता जयराज रोयले बताए ।
च्यारिटी पश्चात संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले सहयोगको लागि फिल्म निर्माण पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । च्यारिटीलाई चलचित्र निशुल्क दिने निर्माताहरु पनि भेटिने रहेछ, उहाँहरुले त झन् टिकट समेत किन्नुभएको छ । यो सहयोग कलाकार संघले कहिल्यै बिर्सने छैन’, उनले भने ।
च्यारिटीबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाएको बताउदै कलाकार परमिता आरएल राणाले सबैलाई फिल्म हेर्न आग्रह गरिन ।
यस्तै अर्का कलाकार बुद्दि तामाङले राम्रो प्रतिक्रियाले खुसि थपेको बताए । ठट्यौली शैलीमा उनले भने, ‘फिल्म हेर्नेहरुले मेरो र फिल्मको तारिफ गरिदिँदा म मख्ख नपरेर को पर्छ त ? छिमेकी ?’ तामाङले आफुले भन्नुभन्दा पनि दर्शकले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने मूख्य कुरा रहेको साथै दि कर्मा दर्शकलाई मन पर्छ भन्नेमा बिश्वास रहेको जनाए ।
फिल्मका निर्देशक देव कुमार श्रेष्ठले कलाकार संघलाई फिल्म मार्फत सहयोग गर्न पाउनु पनि निकै गर्वको कुरा भएको बताए ।
माघ १७ गते रिलिज हुने फिल्ममा परमिता र बुद्दिसँगै नीता ढुंगाना, करण वर्मा, जयराज रोय, संगीता नापित, अनुप सक्सेनालगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
जय मिडिया म्यानेजमेन्ट र श्रीत मिडिया एण्ड इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्मित फिल्म नेपालसँगै विदेशमा पनि रिलिज हुनेछ । रायसँगै श्रीदेव बि.एल. र निशा खतिवडा निर्माता रहेको यस फिल्ममा शारदा खड्का अर्याल सह निर्माताको रुपमा छिन् ।